Company Profile - Jiangnan CNC Machine Fitaovana Co., Ltd.
Ary atsofony sy ny nipaipaika foibe
Tsindry ambony fanadiovana milina
Horizontal machining foibe
Mitsangana machining foibe
Corporate Bika Aman 'endrika
Jiangnan CNC Machine Fitaovana Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2006. Izany dia avo-teknolojia maoderina fitantanana orinasa manokana ao amin'ny fampidirana ny fikarohana, fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, ny varotra sy Ankehitriny-varotra fanompoana CNC machining foibe, miaraka amin'ny fanafarana sy ny fanondranana ny zon'ny . Ny orinasa no misy ao Wenzhou, ny fari-tanin'ny Ranomasina Shina Atsinanana tamin'ny tena mandroso ny toe-karena. Mandrakotra ny faritra ny 35 Mu ary manana mihoatra ny 25.000 metatra toradroa ny modely orinasa trano. Maherin'ny 100 tena mahafeno fepetra,-teknolojia avo, avo-tsara mpiasa matihanina.
Jiangnan CNC Machine Fitaovana Co., Ltd. no nanao ny raharaha filozofia ny "siansa sy ny teknolojia ho toy ny tari-dalan'ny, ny teknolojia ho toy ny tari-dalan'ny, tsena mitodika". Hampiroborobo ny fiarahana miasa fanahin'ny "mandray soa avy rehetra tanjaka, miezaka ny tsara indrindra sy nametraka ny olona voalohany", manaraka ny paikady politika avo iaingana, avo ny fampiasam-bola sy avo ny teknolojia, ary misesy hampiditra an-tampon'ny milina Hentitra loatra marindrano sy mitsangana CNC machining foibe ary CNC ary atsofony milina optimisé andian-dahatsoratra amin'ny famolavolana ara-drafitra. Ny orinasa manerana izao tontolo izao dia manana nandroso faran'izay lehibe CNC pentahedron foibe fikarakarana sy faran'izay lava no malalaka gantry CNC Guideway Grinder marina tsara sy avo Renishau fitaovana fitiliana. Manaraka ny orinasa-pinoany hoe "Best Quality, fiaraha-mientana ifampizarana Mahasoa Price sy tso-po Fanompoana", ny orinasa ny kalitaon'ny manaraka ny politikan'ny "Quality Voalohany, Customer Voalohany", ary manome fo manontolo fanompoana tsara dia tsara ho an'ny mpanjifa.
Dia hampiasa ny vokatra tsara indrindra ho tsara tsara kokoa hanompo mpanjifa sy ny namany, mafy orina mafy orina sy mahonon-tena hevitra tsara, manohana fanahy matihanina, hifantoka amin'ny fototra tombony, hanenjika toetra tsara, tena tsara, tsy miovaova. Izany dia ny fanenjehana mandrakizay mba hanatsarana hatrany ny tena ilaina ny orinasa amin'ny avo-kalitao fanompoana.
Mijidina Machining Center, Wheel Machining Hub Center, Cnc Vertical Machining Centre, Vertical Machining Centre,